Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » Ukuhambahamba kwilifa leSeychelles
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
IMyuziyam yeSizwe yeMbali yeSeychelles
I-Seychelles National Museum yeMbali ihambisa iindwendwe kwiminyaka engama-250 ukuya kwixesha elidlulileyo ibanike incasa yelifa elityebileyo lesiCreole.
IMyuziyam kaZwelonke yezeMbali yindawo ebalaseleyo yokwakha isitayile sobukoloniyali, izinto zakudala kunye neegalari.
Iigalari zibonisa inkcubeko yesiCreole, eqaqambe ngobugcisa obomeleleyo nobomeleleyo - ukusuka kumculo kunye nomdaniso, ukuqamba kunye nemisebenzi yezandla, kukutya okumnandi.
Iinkumbulo ezenziweyo ngexesha lokuhlolwa kwemyuziyam zinokusiwa ekhaya njengezikhumbuzi kwiifom zedoli yemveli, incwadi yemveli, iingxowa, izinto ezenziwe ngomthi nokunye.
Umntu akabutyhilanga ngokwenyani ubuhle beziqithi zeSeychelles de wajonga iingcambu zeli chwebakazi. Ime embindini weVictoria, ikomkhulu lendawo ekuyiwa kuyo, kunye namanqanaba asuka kwiClock Tower eyaziwayo, kwiMyuziyam yeSizwe yezeMbali ibamba iiyunivesithi ezininzi ezibalisa amabali adlulileyo ngezinto zakudala kunye nemifanekiso.
IMyuziyam kaZwelonke yezeMbali isebenza njengememori yexesha elidlulileyo, hayi ngokuqulathiweyo kuphela kodwa nangokwakhiwa kwendlela yobukoloniyali ebonisa ubugcisa bendabuko Seytshels. Ekuqaleni yayakhiwe yiBhanki eNtsha yaseMpuma ukuze bayisebenzise, ​​le myuziyam yavula iingcango zayo ngo-1965 kwaye ngoku yayihlala kwindlu eyayisakuba yiNkundla ePhakamileyo yaseSeychelles, emva kokuba isukile kwinto eyi-Ofisi kaMeya waseVictoria. Ngo-1990.
Ukwamkela emnyango weziko lolondolozo lwembali yinto ekukholelwa ukuba yeyona mfanekiso mncinci kaKumkanikazi uVictoria emhlabeni kwikomkhulu elincinci elinikwe igama lakhe kumthombo weKumkanikazi iJubilee Fountain eyatyhilwa, ngexesha lokulawula kwexesha lokumkani, 5 NgoJanuwari 1900 nguLady Mary Jane Sweet-Escott, umfazi woMlawuli kunye nerhuluneli yokuqala yaseBritane yaseSeychelles, uSir Ernest Bickham Sweet-Escott. Amanyathelo ambalwa kukulala kukaPierre Poivre, umphathi weIsle de France kunye neIle Bourbon onoxanduva lokwazisa isinamon kunye neziqholo kwiziqithi ngokusekwa kweJardin du Roi, inkuthazo emva kwezitiya zemihla zeli gama linye. e-Enfoncement, Anse Royale.
Umsebenzi wokubonelela ngembali yaseSeychelles kunye nokufunyanwa, ukugcinwa kunye nomboniso wezinto zakudala ezinomdla kwimvelaphi ebonisa imizamo kunye neendlela zobomi kumaxesha adlulileyo, imyuziyam yavuselelwa ngo-2018 ukubandakanya umboniso wedijithali kunye nezinye izinto zakudala kunye neegalari ezigubungela imiba ebanzi. Imbali yaseSeychelles kubandakanya uqoqosho, ezopolitiko, imicimbi ephambili kunye nenkcubeko.
Intliziyo yekhaya laseSeychellois
Badume ngokutya kwabo okumnandi, abantu baseSeychellois babenezixhobo ezithile ezibancedayo ekuhambiseni umxube ongaqhelekanga weziqholo kunye nezithako ezintsha. Emuva emini, ikhitshi yayisisakhiwo esahlukileyo kwindlu ephambili, eyakhelwe ngokukodwa ukuthintela imililo yendlu. Izixhobo eziqhelekileyo zasekhitshini zesiCreole ezifana nodaka kunye ne-pestle, iikomityi ze-enamel kunye neepleyiti, i-cassava grater kunye ne 'marmit', imbiza yokupheka yentsimbi efumaneka kuwo onke amakhaya, inokubonwa kumboniso. Inxalenye ebalulekileyo yendlu yesiCreole, imiboniso yeekhitshi zemyuziyam inezinto zakudala ezisasetyenziswayo kwiikhitshi zangoku ezingqonge iSeychelles.
Umzobo wabalobi basekuhlaleni kunye neenqanawa zabo zemithi ezenziwe ngamaplanga, isikhephe esincinci sokuloba, ukuhambisa kwiintsuku apho abalobi babeza kuphuma kusasa ekuseni befumana iintlanzi ezintsha. Ukuba unethamsanqa, kwaye kwangoko ngokwaneleyo, ungayibona le ndlela yesiqhelo njengoko uthatha uhambo lwakusasa ecaleni konxweme olunje ngeBeau Vallon. Kumboniso, ungafumana umgibe wentlanzi owenziwe ngesandla owaziwa ngokuba yi-kazye kunye ne-lansiv, iqokobhe le-conch, abalobi ababelisebenzisa ukuloba i-Seychellois ngaphandle kwamakhaya abo ukuya elunxwemeni okanye kwintengiso yokuthenga ubambiso olutsha losuku, isithethe esigcinwayo siphila unanamhla.
Amayeza endalo ayinxalenye yelifa eliphilayo laseSeychellois. Ukuba sisizwe esisiqithi esincinci, abantu basebenzise uninzi lwezinto abanokuzifumana kwaye oku kubandakanya amayeza. Usikelele ngeentlobo ezahlukeneyo zezinto eziphilayo, amayeza esintu onokubona embonisweni, asetyenziselwa ukunyanga zonke iintlobo zezifo. Ukusuka kwii-tisane ezininzi ze-malaises kunye ne-aches, i-balms epholisayo yokutsha, i-tonics okanye i-'safire 'elungiselelwe kumagqabi kunye neengcambu zezityalo, uninzi lonyango lusasetyenziswa nanamhlanje kwaye kungqinwe ngokwenzululwazi ukuba luluncedo kwimpilo kabani. Ungazibona ezinye zezi zityalo njengoko ujonga ezinye zeendlela zendalo zeziqithi.
Inkcubeko yesiCreole iyaphuphuma bubugcisa obunenkalipho nobunempilo - ukusuka kumculo kunye nomdaniso ukuya kuqokelelo nakwizinto zobugcisa. Ukuqala kobugcisa kwabantu baseSeychellois kuboniswa ngezinto zakudala ezinjengemifanekiso eqingqiweyo kunye nezixhobo zomculo zesintu kubandakanya imigqomo ye-moutia kunye nezinye izixhobo ezenziwe eSeychelles. Unokufumana imifanekiso kunye nezinye izinto zobugcisa, uninzi lwazo, ezinjengeengxowa ze-rafia kunye neminqwazi, ziye zaba zizikhumbuzo ezithandwayo.
Imfashini yesiko laseSeychellois ngezihlandlo ezahlukeneyo kunye neenwele eziqhelekileyo ezazinxitywa ngabafazi ngelo xesha zinokuboniswa kumboniso wemyuziyam. Unokufumana eminye yemidlalo yesiko, eminye idlulisiwe kwaye iqhubeke iphila kuluntu lwanamhlanje. Njengokuba uphonononga ezinye zezinto zakudala uya kuqaphela ukuba ubukho baseAfrika, baseAsia kunye nabaseYurophu buzenze njani inkcubeko yesiCreole.
Ukuxabisa imbali yaseSeychelles
Akukho ndlela ibhetele yokukhumbula uhambo lwakho kwiiholo zembali kunokuthatha isikhumbuzo esincinci ekhaya. Emva kokhenketho lwakho uyeke kwivenkile yezipho yemyuziyam ephethe uluhlu lwezipho zabantu bayo yonke iminyaka. Abaselula bakhetha unodoli wendabuko okanye incwadi yesayensi yamabali okulala njengoko besiya kwilizwe lamaphupha. Unokufumana ubugcisa bendawo obuqala ezingxoweni ukuya kwindalo eyenziwe ngomthi kwaye ungaya ekhaya ne-marmit encinci! Uqinisekile ukuba uza kuzifumanela into kunye nabo bonke abo ubathandayo!